စေတနာသက်သက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » စေတနာသက်သက်	23
Posted by Sine Sant on Dec 16, 2014 in Creative Writing | 23 comments
ကို ပညာတတ်ခြင်း မတတ်ခြင်းနဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေး
တနေ့ ကျနော့် ဆေးခန်းကို ဘေးအိမ်က အင်းသား
လူမျိုး အဖွားတစ်ယောက် ဟင်းချိုင့်လေးဆွဲ
ရင်းရောက်လာပါတယ် ။ သူလာတဲ့အချိန်က
ကျနော်တို့ နေ့ လည်စာ စားနေတဲ့အချိန်ပါ ။
သူ့ ရဲ့ အင်းသားသံဝဲ တဲ့စကားသံနဲ့ 
“ဆရာ တို့ ထမင်းဆားနေတာနဲ့အတော်ပဲ
အဖွား ဟင်းလာပို့ ပေးတာ ” ဆိုပြီး ချိုင့်ကို
ကျနော် က “အဖွားကလည်းဒုက္ခရှာလို ဗျာ
ဒီမှာ ဝိုင်းဖွဲ့ စားနေကြတာ ဟင်းတွေအများကြီး
ပဲဟာ ” ဆိုတော့
အပြုံးမပျက်တဲ့စကားသံနဲ့ ”့ အဖွားကကျွေးချင်
လို့ ပါ ဆရာ ရယ် ဟို ဆရာ့အတွက်တော့
သက်သက်လွတ်ပဲထောင်းခဲ့ပါတယ် ပဲပုတ်နဲ့ 
လေ ” သြော် ကျနော်သက်သက်လွတ်စားတာကို
သိနေပါလား ဒါနဲ့ မေးလိုက်မိတယ်
” ဟုတ်ပါပြီ အဖွားက ဘာတွေထောင်းလာ
တာလဲ ” ” ခါချဉ်ပါ ဆရာ ဥတွေရောပါတယ်
တာနဲ့ ဆရာတို့ အတွက်ပါပိုဝယ်ခဲ့တာ ။်
ကြားရော ကျနော်တို့ တဖွဲ့ လုံး ငိုရမလို ရယ်
စိတ်ထဲကတော့ ” ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အဖွားရယ်
သူ့ စေတနာကိုစော်ကားရာကျမှာစိုးလို့ 
အားနာနာနဲ့ ပဲ လက်ခံလိုက်ပါတယ် ။
ဦးသု says: ကျွန်တော်ကတော့ သက်သက်လွတ်မစားဘူး အကုန်တီးတယ်
ဒါပေမယ့် အရှင်ပုညနန္ဒ ဟောတဲ့
မြင်သား ကြားသား တော့မစားဘူး
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ… ပြောလို့ပြောတာမဟုတ် ခါချဉ်ဥက အတော်ဆိမ့်သဗျ…
ယိုးဒယားတွေက သနပ်ရွက်နဲ့ ချက်စားတယ် … အတော်ဈေးကြီးပါ့…
lu lu says: ပြောသာပြောရတာ အဲ့ခါချဉ် တွေမစားဖူးဘူး
Ma Ei says: .ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေက တစ်ကယ်ကို စေတနာနဲ့ ကျွေးချင်ကြတာပါ…
.အညာကို အလည်သွားတာ ထမင်းပွဲက နေ့တိုင်းကြက်သားဟင်း၊ကြက်ကြော် ကြက်ဥ အမြဲပါတယ်..
.ပြန်မယ့်နေ့ကျမှဘဲ ၀ိုင်းထဲလမ်းလျှောက်နေလို့ခြံထဲက ကြက်ကိုပစ်ခတ်ဆွဲသွာတာမြင်လိုက်ရတော့…
kai says: U.N. agency urges eating insects to fight world hunger …
May 13, 2013 – The U.N.’s Food and Agriculture Organization (FAO) said on Monday that grasshoppers, ants and other members of the insect world are an …
ဒီနေ့တင်.. ကမ္ဘာမှာကြံ့ဖြူမျိုးတုံးတော့မယ်…။ တကမ္ဘာလုံး ၅ကောင်ပဲကျန်တော့တဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်..။
Washington Post‎ –
He wasanorthern white rhinoceros,aspecies on the brink of extinction. Following his death …
လူတွေက.. မကြာမတင်.. သန်း ၈ထောင်.. ၉ထောင်ဖြစ်တော့မယ်..။
ခါချဉ်တွေမွေးမြူရေးလုပ်.. ဥဘစ်ဇနက်ထွန်းကားလာသင့်…။ ထွန်းကားသင့်..။
လူတွေလည်း.. တန်းတူညီမျှသွားအောင်.. ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ.. သက်သတ်လွတ်စားကြဖို့ မြောက်ပေးလှသင့်.. မြှောက်ပေးသင့်..
(ဒါမှ.. ကျုပ်တို့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း.. ပိုစားရမှာ.. ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
kyeemite says: .ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့စေတနာကိုတော့အသိအမှတ်ပြုရမပေါ့လေ… ပညာတတ်မတတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဟိ။
ကြက်သားတွေ သက်သတ်လွတ် ကြော်မလာတာ တော်သေး
သစ်တစ်ပင်ခုတ် ထောင်ဆယ်နှစ်ဆိုပြီး လာတားတဲ့
လူသတ်တာတောင် ၇ နှစ် လို့တွက်ပြီး
လာတားတဲ့ သစ်တောဝန်ထမ်းကို ခုတ်သတ်သွားတာလေ
Kaung Kin Pyar says: ဒီစာလေးဖတ်ပြီး နယ်ကိုတောင် ပြန်လွမ်းလာပြီ….
စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းလေးတွေရှိနေတယ်လို့ သတင်းအတိအကျရထားတယ်…
lu lu says: ဟုတ် ပျောက်နေတာ တကယ်ကြာသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
သတင်းအတိ အကျ ကိုဘယ်လိုများ သိသွားလိမ့် အစ်မ ရေ
ခင် ခ says: ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ခါချဉ်လျှက်စားဆိုတာစားဖူးတယ် ချောင်းဆိုးချင် ချွဲကပ်ချင်ရင် အဲဒီခါချဉ်လျှက်စားထုပ်လေးပြေးဝယ်ပြီးစားလိုက်တာ သက်သာတာကိုး။
အရွယ်လေးရလာလို့ တောနယ်တစ်ခုရောက်တော့ ခါချဉ်လျှက်စားထောင်းနေတဲ့ အဖွားကိုတွေ့လို့ ခါချဉ်လျှက်စားဆိုတာ ခါချဉ်ဥကိုထောင်းပြီးဖော်ရကြတာလို့သိသဗျ။
kai says: ဆေးဆရာကြီး…။
အင်းဆက်တွေက ဆေးဖက်ဝင်တာတွေအများကြီး..။ အာဒါကြောင် ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကိုယ်က.. စားခိုင်းနေတာ..
မြန်မာတွေစားနေတဲ့ ပုရစ်ဆို.. အင်မတန်ဆိမ့်…။
ကမ္ဘာကတောင်ဝယ်ဦးမယ်.။ The most commonly eaten insect groups, according to FAO, are beetles, caterpillars, bees, wasps, ants, grasshoppers, locusts, crickets, cicadas, leaf and planthoppers, scale insects and true bugs, termites, dragonflies and flies.
Insects contain “good fats”, can be rich in calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, selenium and zinc, and areasource of fiber.
Mr. MarGa says: စေတနာ အလွဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: တပည့်လိမ္မာ ဆရာ အာပတ်လွတ်တဲ့။
ခါချဉ်ကို သတ်သတ်လွတ်ထောင်းလာတော့လည်းးးးးးးးးးးးးးးးး :-)
lu lu says: စားလိုက်ရမှာလား ဟင်
ခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့်…
လုပ်ရပ် အမှားအမှန်ထက် …
နောက်က ရှိတဲ့ စိတ်စေသနာလေးတွေကိုပါ …
မြင်ပြီး လက်ခံလိုက်ရတဲ့ အမှားတွေလည်း မနည်းဝူးးး
lu lu says: အမှားပြင်ပေးတာကို လက်ခံမယ့်သူဆို ပြင်ပေးသင့်တယ် ထင်တယ်
တော်ကြာ လူမိုက်အားပေးဖြစ်နေရင် မခက်ဘူးလား နော်
ဦးကြောင်ကြီး says: ကေအိုင်အေ သဗုံမ လုလု အပေါ် စေတနှာဒွေ ပိုနေမိဗီကွယ်.. ခြစ်ကြဇို့ မြံမျံ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သဗုံ့ကြောင် ဆိုပြီး စာတစ်ပုဒ် ရေးချဉ်လာဘီခည
lu lu says: အမြန်သာရေးလိုက်ဒေါ့
အားပေးဖို့ အသင့် ပဲ
uncle gyi says: အင်းလေးရောက်တိုင်းစားတဲ့အစာထဲ
lu lu says: နောက်တခါလာရင် စားဖြစ်အောင် စားသွားပါ အန်ကယ် ရေ
အသက်ကြီးလာလေ သင်ယူစရာတွေများလာလေ ပါပဲ
Wow says: အသီးယားထှာဟယ်.. ခါချဉ်ထောင်းတဲ့ စားကာင်းလို့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်
မြေပဲ ပဲပုတ် ငရုတ်သီးတွေနဲ့ ဗလချောင် ကြော်စားတာလည်း